Lability Intellectual: umqondo, indlela ukuzimisela
Namuhla, ukuze athuthukise ngokugcwele ubuntu, kubalulekile ukwandisa amakhono professional nobuntu ngamunye.
Umsebenzi ngemilingo zobuchopho bomuntu kuncike ngokuphelele phezu izinga intelligence, equkethe ikhono lokufunda, logic, ukuhlaziya ulwazi. Abantu nge ezingeni lelisetulu lability bokusungula unekhono ikhwalithi impendulo enele izimo ezishintshayo, ukuze bathole amakhono entsha futhi ewusizo, kodwa futhi ukwamukelwa izisombululo angajwayelekile.
A professional osebenzisa amakhono abo ukuze zigcwele, ungakwazi ukufihla futhi unqobe amaphutha, umphumela kunesidingo, kanye ukushintsha i-akhawunti yakho siqu futhi esebenza ngaphandle kokwenza iphutha.
Lability, eyahunyushwa isuselwa Latin lisho ukuthi "lushelele nokuntengantenga." I gama elivame ukuqondwa ngayo njengoba ukuhamba esiphezulu kanye nokuntengantenga of psyche, noma isimo bokuphila we lokushisa lomzimba. Futhi lability - a ukuhamba ijwabu sezinzwa futhi kwemisipha, esibonakala by imvamisa enkulu ngawo indwangu kungenziwa esibethelwe isigqi ezishukumisa.
lo mqondo kuvamile impela, njengoba umthetho, abakubonisayo ukuhamba kanye changeability izinqubo ezihlukahlukene emzimbeni. Ngalo mqondo, le lability akuyona njalo kuyimfanelo enhle. Ngo Psychology, igama elithi inquma nokuntengantenga ithi ngokomzwelo, futhi kuzwakala "lability ngokomzwelo".
Ingenye izinhlobonhlobo lability, ifaka phakathi amandla ukushintshela ukunakekela umbani, kanye ushintsho ngokushesha kusukela umsebenzi eyodwa kuya kwenye ngaphandle amaphutha.
lability bokusungula It kuncike izici neurophysiological isakhiwo we- cortex cerebral. Kuyinto yemvelo inqubo deterministic ukuthi ukuqeqeshwa umkhuba hhayi kungathinta. Intellectual lability ezingeni kuthinta izinga excitation futhi okusithiyayo e izinzwa, degree of yakhoibrium yalezi zinhlelo.
I lability ephakeme lomuntu, ubuchopho ngeke kukwazi ukuba ulwazi wathola nokwenza nokudidiyela lengqondo ukusabela. Singasho ukuthi ezingeni lability yisikali yokunquma speed nokunemba okuqonda nokucubungula ulwazi wathola.
Umbhali indlela "lability Intellectual" - Kozlova VT
In the test, uchungechunge umzimba elula ukuthi umemezela experimenter. Ukuze cabanga umsebenzi ngamunye, isihloko wanikezwa 4-5 imizuzwana. Ngaphambi kokuthi uqale ukubhekana experimenter esixwayisa ekuqaleni test, nokuthi udinga ukuphendula ngokucophelela ngamunye ezisohleni kwifomu. Ngaphambi kokuqala izindlela bokusungula lability umuntu uphathiswe igunya experimenter kufanele kuqala zonke izinto kuze kuphele isikhathi yokuhlola ecacile neqondakalayo ukuphimisa isibalo tikwele, lapho unikezwa umsebenzi.
Test lability bokusungula kwenziwe ukuze ukubikezela okuphumelela zokuba umuntu aqeqeshelwe amakhono, ukuthuthukiswa imisebenzi ehlukahlukene kanye nokuhlolisisa izinga zezabasebenzi. Olwenziwe isivivinyo okumelwe zenzeke nge emakamu eliphezulu futhi high isinyathelo isivinini. Test lability bokusungula kungenziwa noma iqembu noma ngasese. Phakathi isikhathi esabelwe kwezihloko enze uchungechunge lwezinguquko imisebenzi elula ezisebusweni ifomu ekhethekile.
Izindlela lability bokusungula It is hhayi benganhlanhlathi. Esikhathini izincwadi, Psychology ukucacisa lability ezingeni bokusungula bavame ukuhola lenqwaba test nenqubo isilinganiso lwezigaba 4 ezahlukene indices ezahlukene lability. Basuke ahlukaniswe ivolumu izimpendulo ezingalungile ekuxazululeni test.
ukuhlolwa Assessment ezicela ku inani izimpendulo ezingalungile. Imiphumela yokuphambuka zibandakanya wenze iphutha noma ungenzanga, futhi umsebenzi aphuthelwe. Ukuhlolwa okuhle ukuthi kudinga isikhathi esincane ekhaya azokuqhubela futhi debriefing. Ngemva ndima yayo, wena ongabikezela ukufaneleka test ngasinye.
Waba yini umphumela wesibindi isivivinyo:
kusuka 1 kuya 4 izimpendulo okungalungile - idatha esihle kakhulu yokufunda, lability ezingeni eliphezulu;
5 kuya ku-9 - i-lability test ezingeni isilinganiso;
10-14 izimpendulo okungalungile - nobunzima ekuqeqesheni, lability ongaphakeme;
15 noma ngaphezulu - kunzima ukuhlola umfundi.
Le nqubo Kunconywa ukusebenzisa izingane, ezisukela eminyakeni 12-13. Kucatsanisa inani wathola izimpendulo okungalungile inani elifanele, ungenza isiphetho ngalokho nemingcele Kudingeka sihlakulele (isivinini noma ukunemba) ngesikhathi sesivivinyo umsebenzi.
Le ndoda esicashile - umuntu ezifihliwe ngasese noma
Yiba abahahayo angathandeki kungani? Yiba abahahayo - kuhle noma kubi?
Indlela aphendule luhlaza - akulula, kodwa kungenzeka
Umhlaba ongaphakathi - kuyini? Ingqikithi nomqondo
Indlela Yokwenza "imisho akuphelele" I-Teen: incazelo
Ukwelashwa nokuvikelwa thrombophlebitis. Zokupheka of imithi yendabuko
Leggings Push Up: kanjani futhi yini okufanele uyigqoke?
Yini ephilisa i-andrologist? Uhlu lwezifo ezithathwa yi-andrologist we-urologist
Biography kanye imbangela yokufa Andy Hug
Iyini indima yensimbi emzimbeni womuntu?
Novosvit (izimonyo): ukubuyekezwa, izinhlobo, umkhiqizi
Amazinga Key amabhange Russian. Izinga ayisihluthulelo Central Bank of the Russian Federation
Mineritovaya isitofu ngokuba amabhati: Ukucaciswa nokufakwa
I-Penza Pedagogical Institute ebizwa nge-VG Belinsky: amakhono, ibanga elidlula
I-spider-wasp: incazelo emfushane
Yini ukunikeza intombazane engu-7?